तनहुँमा भेटियो पल शाहविरुद्ध अर्को गतिलो प्रमाण,,,,
काठमाडौं – अभिनेता पल शाहविरुद्ध अर्को प्रमाण फेला परेको छ । शाहले नवलपुरमा जस्तै तनहुँ प्रहरीलाई दिएको बयानमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको अस्वीकार गरेका थिए । तर उनले दुवै स्थानमा दिएको बयानमा ‘उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने मौखिक सहमति’ भएको स्वीकारे पछि प्रहरीले यसलाई प्रमाणको रुपमा मानेको छ ।
पीडितले भने १४ वैशाख २०७८ मा तनहुँको दुलेगौडास्थित प्रदीप थापको घरमा वेग्लावेग्लै कोठामा सुतेको अवस्थामा राति १२ बजेतिर नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी भएको बताएकी छन् । ‘विवाह गर्ने झुठो आस देखाएर मैले हुँदैन भन्दा पनि उनले जबरजस्ती गराएका हुन्’ पीडितले भनेकी छन् । पलले भने घटना भएको भनिएको वेला पीडितलाई ‘वियर खान दिएर फेसवास लिएर आफ्नो कोठामा गएको’ जिकिर गरेका छन् । नवलपुरको गैंडाकोट रिसोर्टमा भने पीडितको कोठामा ‘हिजो डर लागेकाले राम्रोसँग सुत’ भन्नलाई मात्र गएको दाबी शाहले गरेका थिए ।
नवलपुरमा भन्दा फरक विषय तनहुँमा शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशीविरुद्ध पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको छ । पीडितको बयान अनुसार जोशीले शाहसँग घुम्न जान र उनले भनेको मान्न भन्दै फकाउने गरेका थिए । ‘भिडियो सुटिङका क्रममा विभिन्न स्थानमा रहँदा एउटै कोठामा बस्न बाध्य पारी जबरजस्ती करणी गर्ने कार्यमा जोशीले सहयोग गरेका थिए’ उनले भनेकी छन् । अदालतमा दायर मुद्दाको निष्कर्षमा पनि जोशीले शाहसँग सम्बन्ध राख्न र नजिक हुन वातावरण बनाइदिएको भनिएको छ । शाहसँग घुम्न जाँदा उनले भनेको सबै कुरा माने भविश्य राम्रो हुन्छ भनेर प्रलोभन देखाएको आरोप छ । नाबालिकाको बुबाले पनि पुरक जाहेरी दिँदै पलका म्यानेजर जोशीले ‘सम्बन्ध राख, तिमी र तिम्रो भविश्य राम्रो हुन्छ’ भनेर फकाएर एउटै कोठामा बस्न बाध्य पारेको भनिएको छ ।
करणी भएपछि त्यसबारे कसैलाई नभन्न, प्रहरीमा उजुरी नगर्न र मिल्न दबाब दिएको आरोप छ । ‘मुख्य अपराधीलाई जोगाउन उनले आपराधिक षड्यन्त्रको कसूर गरेका थिए’ पुरक जोहरीमा उल्लेख छ । जोशी स्वयम्ले पनि बयानमा पीडित नाबालिकलाई प्रलोभनमा पार्न खोजेको स्वीकारेका छन् । उनले नाबालिकाबारे सूचना संकलन गर्न पीडितकी एक जना साथीलाई प्रलोभन देखाएको पनि खुलाएका छन् । ‘मलाई शाहले पुनः म्यानेजरको जिम्मेवारी दिएकाले मैले पीडित नाबालिकालाई एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने हुँदा मिलेर जाउँभन्दा पीडितले उजुरी गर्छु भनेकाले मैले दुर्गा अधिकारीलाई पीडित नाबालिका के गर्छिन् खबर गर । तिमीलाई मैले गीत संगीतमा सहयोग गर्छु भनेको थिएँ’, जोशीले भनेका छन्, ‘अधिकारीले भने अनुसार काम नगरेकीले उनलाई धम्कीपूर्ण म्यासेज पनि पठाएको थिएँ ।’
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार सुरुमा मासिक २५ हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेका म्यानेजर जोशीको शाहसँग मनमुटाव भएपछि २०७८ असारमा म्यानेजरबाट हटाइएका थिए । तर केहीपछि विवाद सुरु भएपछि शाहले उनलाई सम्पर्क गरेर तलब दोब्बर बनाएर सहयोग गर्न भनेका थिए । ‘त्यसपछि नै उनले पीडितलाई प्रलोभन देखाउन र उनको हरेक गतिविधिबारे सूचना संकलन गर्न थालेका थिए’ ती अधिकृत भन्छन् ।
नाबालिकाको गतिविधिबारे सूचना संकलनका लागि उनले अधिकारीलाई प्रस्ताव गरेका थिए । अधिकारीको बयान अनुसार उनलाई पीडित नाबालिका ‘कहाँ जान्छे ? कोसँग के कस्तो कुरा गर्छे ? त्यसबारे राम्रो नराम्रो खबर बुझेर दिए ५० लाख रुपैयाँसम्म’ दिने प्रस्ताव राखिएको थियो । साथै, उनलाई म्यूजिक भिडियोमा खेल्ने अवसर पनि दिने आश्वसन दिइएको थियो । तर, नमानेपछि धम्कीपूर्ण म्यासेज पठाएको भनिएको छ ।
यसरी पठाइएको म्यासेज आफ्नै भएको पलका म्यानेजर जोशीले पनि स्वीकारेका छन् । जोशीले आवेगमा आफूलाई मान्छे मार्न केही जस्तो लाग्दैन भनेर समेत भनेको बयान दिएका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार तनहुँमा दायर मुद्दाका प्रमाणहरु नवलपरासी पूर्वमा भएभन्दा धेरै भिन्न नभए पनि म्यानेजर जोशीको बयान आफैंमा पनि अभियोग पुष्टि हुने एउटा बलियो आधार हो । ‘कुनै सम्बन्ध थिएन भने उनले ढाकछोपका लागि किन भूमिका खेले भन्ने स्वभाविक प्रश्न उठ्छ’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘यसले मुद्दालाई थप बलियो बनाएको छ ।’
२०७८ चैत्र १०, बिहीबार प्रकाशित0Minutes 138 Views